ယိုကိုဟားမားအာကရန်းဂစိုးခို ၏ ရှုခင်းနေရာ ZEKKEI Japan
ဟိုးအရင်က မဲအိခေတ်က ဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ သမိုင်းဝင်အဆောက်အဦးဖြစ်ပေမယ့် လက်ရှိခေတ်က ဈေးဝယ်စင်တာ နဲ့ စားသောက်ဆိုင်တွေကို လည်ပတ်နိုင်တဲ့ ခရီးသွားနေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဆောင်းရာသီမှာ စကိတ်ကွင်းတွေ ပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ မီးထွန်းထားတဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်က လှပြီး ဂျပန်လူငယ်တွေ ချိန်းတွေ့ ကြတဲ့ နေရာအဖြစ်လည်း တွဲဖက်တည်ရှိနေပါတယ်။
Kanagawa ken yokohamashinakakushinkō 1 - 1 - 1
အဆောက်အဦးနံပါတ် ၁ : ၁၀း၀၀ မှ ၁၉း၀၀
အဆောက်အဦးနံပါတ် ၂ : ၁၁း၀၀ မှ ၂၀း၀၀
( ကမ္ဘာ့နံပါတ်၁မနက်စာ ) လို့ နာမည်ကြီးတဲ့ ဟာဝါအီရဲ့ ( bills ) လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ခရစ္စမတ်ရာသီမှာ ခရစ္စမတ်ဈေးပွဲတော်လည်း ကျင်းပပြီး လူများစွာဖြင့် စည်ကားလှပါတယ်။
JR . အစိုးရမြေအောက်ရထား ( Sakuragichōဘူတာ ) မှ ခိရှမိချိ မှတဆင့် ၁၅ မိနစ် လမ်းလျှောက် . JR . အစိုးရမြေအောက်ရထား ( Kan'nai ဘူတာ ) မှ ၁၅ မိနစ် လမ်းလျှောက် . မိနတိုမိရာအိလိုင်း ( Bashadōဘူတာ ) သို့ မဟုတ် ( Nihon'ōdōriဘူတာ ) မှ ၆မိနစ် လမ်းလျှောက် . မိနတိုမိရာအိလိုင်း ( Minatomiraiဘူတာ ) မှ ၁၂ မိနစ် လမ်းလျှောက်